Zviri pamutemo Kudhawunirodha Bulli Bai Apk? [Sulli Deals] - Luso Gamer
Kunyangwe vashandisi ve smartphone vatoziva nezve Sulli Deals. Kana zvisiri saka usazvinetse nekuti pano tozotsanangura zvakadzama muchidimbu. Zvakafanana nechibvumirano chakapfuura, kunyomba kutsva uku kwakatsamwisa vanhu. Kana iwe uchida kuongorora uye kunzwisisa chiitiko chitsva ichi wega wobva waisa Bulli Bai Apk.
Vanhu vakanga vachironga kunakidzwa neGore Idzva iri nemufaro mutsva nerufaro. Zvisinei, vanhu vakashatirwa pavakanzwa nezvechikumbiro chitsva ichi. Izvi zvagumbura hurumende yese mushure mekutambira zvichemo izvi.
Kusvika panguva ino, nhau dzakakonzera kukakavara kwakasiyana pamhepo mishumo. Icho chinoti chinosanganisa hurumende nedambudziko rakakosha. Zvakadaro, hurumende inoita kunge iri kutora matanho akasimba kupokana neapp. Kuti uongorore maficha eapp muchidimbu, dhawunirodha Bulli Bai App kubva pano.
Chii chinonzi Bulli Bai Apk
Bulli Bai Apk ipuratifomu inoenderana nevakuru yepamhepo uko kwakaiswa mapikicha akasiyana ane mukurumbira. Izvi zvinosanganisira Vatapi venhau, Social Activists, Vadzidzi nevamwe vanhu vane hukama. Kunyangwe vashandisi vanoti vanogadzira vanorodha mafoto emaokisheni.
Mushure mekuchera zvakadzika uye kuunganidza ruzivo kubva kwakasiyana zvinyorwa. Nhasi pano tiri kubudirira mukupa inounganidzwa yechokwadi ruzivo. Izvi zvinotungamira vashandisi ve smartphone kuti vanzwisise zvakakosha zvine chekuita nekushandisa.
Uyezve pano tichakurukura dzimwe nyaya dzakakosha. Izvo zvakapararira zvachose kutsamwa kukuru uku pakati pevanhu vanokonzera kukuvadza kwevanhu. Kunyangwe isu tisina chokwadi chekuti izvo hurumende yeIndia iri kuronga kuita izvi.
Nekudaro, gurukota reIT nemamwe masangano ane chekuita vakatotora nyaya iyi inopisa. Zvirevo zvakasiyana zvakaburitswa nevakuru maererano nekurambidza vese Sulli Bai naBulli Bai. Mushure mekuwana iyi mhinduro yakasimba kubva kudivi revanhu.
Mwedzi mishomanana kumashure kukakavara kwakafanana kwakatsamwisa vanhu nekutengesa vakadzi vechiMuslim nemifananidzo yavo. Zvakadaro hurumende inoti inopokana nenyaya iyi zvakasimba uye kugadzirisa chiitiko chinonyadzisa ichi nenguva. Mushure memwedzi mishoma, ikozvino dambudziko idzva iri rakatarisa musoro waro.
Iko pfungwa yechishandiso chitsva ichi chakafanana zvachose nepuratifomu yapfuura. Kunyangwe vagadziri vakangotengesa vanhu vane mukurumbira mapikicha ekutengesa. Asi vashandisi vanoti vakadzi vakasiyana vakaiswawo pane auction list.
Mushure mekuongorora mishumo inosvikika uye maonero akasiyana enyanzvi. Iyi puratifomu inotsigira oction maitiro emifananidzo yako pasina mvumo. Zvinonzi hazvisi pamutemo uye vanhu vari kuda kururamisira nekukurumidza.
Maererano nevakuru, Bulli Bai App Github yakatanga kubudiswa musi wa 1 January 2022. Iyo yaifungidzirwa kuva zuva rinofadza Idzva Idzva. Pakutanga, vakuru vakuru havafarire kutora chero danho rakasimba vachipokana neimwe app.
Asi kana dambudziko raenda kuhutachiona, iko zvino masangano ane mutoro ave kuita kunge ari kuzvipira kugadzirisa iro dambudziko. Saka iwe unofarira kutsigira zviri pamutemo chimiro chemasangano wobva wadzivirira kuisa Apk.
Iyi chaiyo android app yakaburitswa gore rapfuura yakanangana nevakadzi vechiMuslim. Zvakadaro, nyanzvi dzirikuti dzinowana iyo puratifomu yakafanana neSulli App. Iyo yakaburitswa gore rapfuura uye yaive nebasa rekuisa mapikicha evakadzi vakakurumbira vechiMuslim.
Vatungamiri Vezvematongerwo enyika Vanomira
Mutungamiriri anopikisa weIndia Rahul Gandi akapasisa chirevo ichi chekuregeredza hurumende uye kusafarira. Nawab Malik NCP mutungamiri akatsamwa kuona Vocal Muslim Vakadzi vachitengeswa pamhepo. Vati gurukota rezvemukati menyika vatore matanho nekukasika.
Mumwe mutungamiri ane mukurumbira wezvematongerwo enyika Mehbooba Mufti anopomera hurumende pachena nekupa ruoko rwemahara kune rimwe dambudziko. Kunyange iye ari kungopomera hurumende mhosva yekuparadza rudzi. Mutungamiriri wacho akashora mabasa okuparadza rudzi akadaro.
Chiito cheHurumende paDambudziko
Mushure mekugamuchira zvichemo zvakati wandei nezve iyo yakafanana Bulli Bai Apk. Iyo IT Minister Ashwini Vaishnaw inozivisa kuzivisa GitHub yekubvisa zvirimo. GitHub yakatotora danho uye yakadzivirira kudzosera vashandisi kubva pachigadzirwa.
Uyezve, vanhu vane ruzivo rushoma vanokurudzirwa kuti vadzivise kuisa akadaro mafaera eapp. CERT nezviremera zvemapurisa zvakabatana uye kupanana ruzivo. Kuti udzivise mamwe matambudziko uye usarega mamwe manzwiro achikuvadza.
Zviri pamutemo Kuisa Iyo Apk
Mushure mekuita tsvagiridzo uye nekutsvaga zvinosvikika online zvemukati. Isu tinongowana iyo Bulli Bai GitHub isiri pamutemo uye tinokurudzira vamwe vashandisi ve smartphone kuti vadzivise kuisa iyo application. Kutsigira feminism uye kuchengetedzwa kwevakadzi.
Iwe unoverenga zvimwe zvine chekuita neblog zvinyorwa zvine chekuita nemisoro yakasiyana ndapota tinya pane zvinotevera zvinongedzo. Zviri Wepamusoro 5 PUBG ESP Hacks uye GameLoop Yakarambidzwa muIndia.
Kana iwe uchitenda mapuratifomu akadaro musoro mukuru kunzanga yevanhu. Kunyanya kuvakadzi, avo vari kunetseka kuwana kodzero dzavo dzakanaka. Kana iwe uchida kuongorora nyaya uri wega wobva warodha Bulli Bai Apk online.